7 Nzira dzekuvaka Kuteerera kuvimbika neSocial Media
Kutendeseka kweKatendi neSocial Media
Social Media inotora basa rinokosha pakuvaka hukama hune chinangwa nevanotema, saka vanogara newe nokusingaperi.
Vakai Ukama Hwechokwadi
Chinokosha kuvashambadzi vakavimbika ndiko kuita kuti hukama hubatsirane-kupa uye kutora.
Ndiyo nzira yakakwana yekuvaka kutengesa mutengi uye kuonekwa panguva imwe chete.
Teerera uye tibatane nevateereri
Kana iwe uchikoshesa vatengi vako pane kutaurirana navo mumagariro evanhu maererano nezvinodiwa zvezvino
Zvemagariro ehupfumi ndiwo mararamiro ari kuparidzira shoko ravo kune vateveri vavo uye vateveri. Kuwedzera kukodzwa kwevatengi kwete kungozivisa kupindura nekuita.
Ita pamwe neAvo Active Advocates
Vatengi vakatendeseka ndeimwe yezvinhu zvinokosha zvebhizimisi. Iwe unoda kuramba uchingobatana nevatsigiri vako vakavimbika kwazvo kuti vazoenderera mberi vachitsigira marashi ako.
Dzokororawo zvinyorwa zvako zvakanakisisa
Kukunda kutarisa kwe "vateereri vatsva" muhutano hwemagariro evanhu iwe ndekugovana yako zvakanakisisa zviri mukati. Zvakanakisisa zviri mukati ndizvo zvakagamuchira kushamwaridzana kukuru uye mhinduro dzakanaka kubva kuvateereri vako.
Kuratidzira 'Pasi Pechiitiko' Yako Kambani
Vatengesi vanoziva kuti vatengi vanowanzova vakanaka kuita bhizinesi newe apo unotanga kushamwaridzana navo pane imwe nzvimbo.
Ipai Purogiramu Yezvipo
Zvakakosha kugadzira nekuchengetedza rhythm nguva dzose. Iwe unoda kuoneka kukosha kwaunopa iwe yese inowanikwa ndeyekutengeserana kwakanaka kwevatengi vako vanoramba vachivimbika.
Nhanho Nhanho inokurudzira mutendi kuvimbika neSocial Media
Join our Digital Marketing Course kuti uvake Career yako muDain Markeing kana kukura iwe unhu.
Facebook Instant Articles Zvinyorwa zvinobatsira vaParidzi